जुम्री बसपार्ककाे रमिता किहले सम्म ? के भन्छन सराेकारवालाहरू
admin, १ आश्विन २०७७, बिहीबार ०४:३९ प्रकाशित
असाेज १ ,प्यूठान नगरपालिका ४ जुम्रीमा रहेको जिल्लाकै पहिलो बसपार्क अस्तव्यस्त छ । अव्यस्थित रुपमा राखिएका बसहरु,ढेव्रीहरु,ग्यारेजजहरु, र यत्रतत्र भएको फोहोरले कुरुप भएको देखिन्छ । बसपार्कमा रहेको सार्वजनिक शौचालय समेत व्यक्तिगत सामान राख्ने ठाउँ भएकोछ । टिभिमा माकुराको जालो लागेको छ । जुम्री बसपार्क व्यवस्थापन समितिले टिकट काउन्टर , समितिको कार्यालय सन्चालन गर्नका लागि बनाउन थालेको संरचना मैहिनौँ भयो तर निर्माणको काम सम्पन्न भएको छैन । राप्ती समितिको नाममा रहेको बसपार्कले गति लिन नसक्दा सर्वसाधारण लगायत स्थानिय बासिन्दाहरु धुलो खादै बस्न बाध्य छन । जिल्लाकै मुटु भनेर चिनिने बसपार्कलाई कैले सम्म रमिता देखाउने ? किन व्यवस्थित हुन सकेन जुम्री बसपार्क ? सरोकारवालाहरुको बिचार ।
नगर प्रमुख, प्युठान नगरपालिका ।
जिल्ला स्तरीय बसपार्कको रुपमा हिजोका दिनमा जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय भयो । बसपार्क निर्माण गर्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरुले जग्गादान गरेका थिए । जसमा हिजो राप्ती बसपार्कको नाममा दर्ता भयो । संघसंस्थाको नाममा दर्ता भएकोले राज्यले ठूलो लगानी गर्न सकेन् । हामीले यो विषयमा बारम्बार विभिन्न सरकारी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिमा पटक पटक आवाजहरु राखेको हो । मुख्यत सरकारले लगानी गर्नका लागि सरकारी निकायमा दर्ता भएपछि हामी लगानी गर्छौ भन्ने कुरा भयो । सानो तिनो १०÷१२ लाखको कामहरु गर्यो सहयोग त्यसकारणले गर्दा निर्माणको कामहरु ढिलाई भयो । हामीले राप्ती यातायात व्यवसायि समितिमा पनि हामीले धेरै आग्रह ग¥यौ उहाँहरुले जग्गा फिर्ता गर्छौ भन्ने कुरो छ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरी हामी कुनै ठाउँमा जान सकेनौ । राप्ती समितिले आधा जग्गा हामी फिर्ता दिन्छौ भनेको छ , हामीले आधा भएपनि हुन्छ भनेका छौँ । नगरपालिकाले,स्थानीय व्यक्ति, संस्थाले बीच बीचमा जग्गाहरु पनि छ । डिपीआर गर्ने नगरपालिकाले योजनामा राखेपनि जग्गा अर्काको नाममा हुदाँ डिपीआरको काम समेत हुन सकेको छैन् । नगरपालिकाले जग्गा प्राप्ती गर्ने, डिपीआर गर्ने लगाएतका कामहरु गरेर व्यवस्थित बसपार्क बनाउने योजना छ ।
जुम्री बसपार्क व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष
जुम्री बसपार्क प्यूठान जिल्लाको पहिलो बसपार्क रहेको छ यसको तत्कालीन हिसावमा जिल्लाको सर्वपक्षीय बैठकको हिसावले यसमा सवै राजनीतिक दलहरु सहितको बैठकबाट जिल्लाको पहिलो बसपार्क बनाउने भनेर नामाकरण गरियो । नामाकरणको सवालमा काम गर्दै जादा केहि प्राविधिक त्रुटीहरु भएका छन् । हामी छलफल गर्दै काम गरीरहेका छौ । जुम्री बसपार्क राप्ती समिति र स्वर्गद्धारी समिति एउटै थियो त्यो समितिहँुदा तत्कालीन हिसाबमा राप्ती समितिको नाममा दर्ता भएको र यसमा केहि विकास निर्माण गर्दा काम गर्ने दौडानमा केहि असहज भएको महसुस भएको छ ।
हामीले विभिन्न ठाउँमा व्यवस्थापन समिति र व्यक्तिगत ढगंले संस्थागत हिसावले म आफुले पनि बसपार्कको विकासको बारेमा विभिन्न निकाय संग कुरा एवं छलफल गरीरहेका छौ । बसपार्क जाने सड्क पिच गर्ने सवालमा काउन्टरका सवालहरुमा लगाएत कुरा गर्दा बसपार्क चाहिं राप्ती समितिको नाममा भएको हुँदा यसलाई विकास निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्न अलिकति गाहे भयो भनेर विभागिय ठाउँबाट र जनप्रतिनिधी ज्यूहरुबाट पनि आएको छ ।
मैले संस्थागत हिसाबले राप्ती समितिमा पनि पटकपटक कुरा गरेको छु यहाँका नगर प्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपती हाम्रो पार्टीका नेता कृष्णध्वज खड्का लगायतले पनि यो बारेमा कुराकानी गर्दाखेरी राप्ती समितिले यो लकडाउन पछाडी आधा जग्गा बसपार्क व्यवस्थापन समितिलाई अथवा यहाँको स्थानीय तहलाई फिर्ता दिने पनि मौखिक सहमती भएको छ । सहमतीका हिसाबले हामीले आधा जग्गा ल्याउने तयारी गरीरहेका छौँ यो लकडाउन खुलेपछी कोरोनाको महामारी सक्के पछी हाम्रो त्यो प्रकृया अगाडी बढाउने तयारी भैरहेको छ । बसपार्क विकासको लागि हामीले पटक पटक स्थानीय तहहरु विभागिय समितिसंग कुरा कानी गरीगरीरहेका छौँ र गर्दै जादा केही प्राविधीक समस्या देखिएकोले यो काम पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने निरन्तर छलफल भैरहेको छ । यो भन्दा पहिले म व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भएपछि वा हाम्रो टिम आइसके पछि हामीले चाहिँ अव्यवस्थित रहेको बसपार्कको जो काउन्टर सडकमा थियो त्यसलाई हामीले बसपार्कमै राख्ने कुरा, अफिस संचालन गर्ने कुरा भएको छ । अफिस संचालनका लागि केही काम पुरा हुन बाँकी छ त्यो तत्काल कोरोना महामारी भएकाले कोरोना केहि कम भए लगत्तै त्यो काम पुरा गर्ने छाँै । सामान्य अफिस संचालनका लागि दुई कोठा बरावरको भवनको तयारी व्यवस्थापन समितिले गरेका छौ । धेरै थोरै हामीले खर्च समेत बसपार्क व्यवस्थापन समितिमा पैसा संकलन भएको छ । त्यसले हामीले ठोस कार्य गर्ने रणनीतिक योजना बनाएका छाँै । काम गर्ने दौडानमा हामीलाई अपुग हुने पैसा स्थानीयतहले केही सहयोग गर्ने पनि आस्वासन दिनुभएको छ त्यसकारणले हामीले जग्गा चाँही समितिको नाममा अथवा स्थानीय तहको नाममा लिईसकेपछी यसको विकासको काम अगाडी बढ्छ भन्ने लागेको छ । त्यो हुदै गार्दाखेरी केही तपाईहरु मिडियाकर्मी साथीहरुले अथवा राजनीतिक दल जनप्रतिनीधि र स्थानीय मिलेर काम गर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । बसपार्क राप्ती समितिको नाममा भए पनि बाटो सार्वजनिक भएको हुनाले सम्बन्धित ठाउँमा घचघचाइदिनको निम्ती हामीले आफ्नो बसपार्क समितिबाट त्यो ठाउँलाइ पिच गर्नको नीम्ति र त्यसमा स्थानीयतहले बजेट हाल्नु पर्छ भन्ने म आफुलाई र संस्थालाई लागेको छ । विभिन्न कार्यक्रमबाट प्राप्त केही रकम समितिको नाममा छ वर्षौ देखि अव्यवस्थित भएको बसपार्कलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडी बढाउनु पर्छ भनी हामिले केही कामहरु गर्यौ। हामी आइसके पछि बसपार्कमा काउन्टर लग्ने कुरा अव्यवस्थित रहेका घुम्तीहरु टहरारु हटाउने कुरा भाडाका दर रेटका कुराहरु लगायत अफिस संचालन गर्ने कुराहरु पनि भएका छन् । हाम्रो समिति खातामात्र लिएर आएको थियो समितीमा केही पैसा महोत्सव लगाएर र विभिन्न कार्यक्रम लगाएर समेत हामीले पैसा संकलन गरेका छौ यद्यपी विभिन्न निकायहरुको सरकारी संरचनाहरुको राजनीतिक दलहरुको विकासे अड्डाहरुको स्थानिय तहहरुको आवास्यक चासो रहनु पर्ने हामिले देखेका छौ । काम गर्ने क्रममा केहि व्यक्तिहरु नकारात्मक देखिए पनि हामीले आटेका काम गर्ने छौ । हामीले जुम्री बसपार्क भने पनि यो जिल्लाको पहिलो प्यूठान बसपार्क भनेर नामाकरण गरिएको छ । बसपार्क व्यवस्थीत ढंगले अगाडि बढाउनको निम्ती फेरी पनि जिल्लाका राजनितीक दलहरु यहाँका मान्यजीहरु यहाका जन प्रतिनिधिहरु स्थनिय सरकार सवै एक भएर बसपार्कलाइ व्यवस्थति ढंगले अगाडि बढाउनको निम्ती सवैको आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
बसपार्क व्यवस्थापन समिति पूर्व उपाध्यक्ष
हामीले बसपार्क बनाउनका लागि निकै दुख गरेका हांैँ । हाम्रै पहलमा यती सम्म भयो । पछी समिति फेरीयो । के गरे गरे व्यवस्थापन गर्नै सकेनन् । बसपार्कका लागि टिभि समेत राखियो तर त्यो माकुराको जालो लागेर अस्तव्यस्त छ । जती आउछन केहि गरेनन् बसपार्कका लागि भनेर महोत्सव समेत गरे तर एक रुपैया समेत देखाएका छैनन्। विकासका नाममा खाने गरेका छन टाउकेहरु पैसामा विकिरहेका छन बसपार्क विकासका लागि सकारात्मक विचार भएका मान्छे कोही पनि छैनन् । गर्न खोज्नेका लागि खुट्टा तान्ने प्रवृतीले पनि विकास हुन नसकेको हो । अहिलेको अध्यक्ष सुमन हुनुहुन्छ उहाँले गर्छु भनेर एक पटकलाई दिनुस भन्दै अध्यक्ष हुनु भयो केही गरेर देखाउछु भन्नुभयो तर खै केही गर्नु भएन् । पहिलेकै अवस्था भन्दा पनि झन कुरुप बन्दै गयो । बसपार्कमा बन्न लागेको संरचना तंगभंग छ यो के गर्न खोजेको हो बुझिनसक्नु छ । व्यवस्थापनका लागि स्थानीयले पैसा समेत उठाए । काम गर्छु भनेर लागीसकेपछी नगर्दा लाज मान्नु पर्ने हो लाज नभएकाहरु । यस्तो रमीता देखाउन भन्दा बोट विरुवा लगाउने गाडीहरु अव्यवस्थित भएकाले व्यवस्थित गर्ने । गाडीमा आएका फोहोरहरु बसपार्कमा यत्रतत्र फ्याक्दा फोहोर बढेको छ यसमा सबै सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ । बसपार्कको नाममा व्यापार भैरहेको छ । हामीले दिएको जग्गा फिर्ता माग्नु पर्ने स्थिती नआउला भन्न सकिन्न । बनेका संरचना भत्कन लाएको छ यो कुरा कस्ले बुझने हो ?
बसपार्क व्यवस्थापन समिति उपाध्यक्ष
बसपार्क व्यवस्थीत हुन्छ की भनेर लागि परियो तर केहि भएन । हामीले खेती गरेको जग्गा काटेर दियौ तर हाल सम्म उस्तै छ कुनै फरक देखिएन् । म अहिले उपध्यक्ष रहेछु तर मेरो भुमिका केही छैन वैठक पनि कतिबेला हुन्छ थाहा हुदैन समिति विना निर्णय गरेर वसपार्क व्यवस्थापनका लागि महोत्सव लगाए, तर त्यो आफुले खान हो कि वसपार्क व्यवस्थापन गर्न हो ? खैत अझै केहि गरेनन् । बसपार्कको नाम लिदै पैसा खादै न आफुले गर्ने न अरुलाइ गर्न दिने राजनिति खिचातानीले यो काम सफल हुन सकेको छैन । स्थानिय जनताको चाहाना नबुझि स्थानिय भन्दा बाहिरका व्यक्ति समितिमा भएकाले बसपार्क व्यवस्थापन हुन सकेको छैन्।
जुम्री स्थानीय नागरिक
बसपार्क राप्ती समितिमा भयो । राज्यको स्वामित्वमा नहँुदा राज्यले लगानी लगाउदैँन भन्छन् । बसपार्क विकासका लागि पहिलो कुरा राप्ती समितिको नाममा छ बसपार्क समिति वा नगरपालिकाको नाममा ल्याउनु पर्छ । विकासका लागि यहाँका नागरिकहरुले गंभिरता पूर्वक चासो दिनु पर्छ बसपार्क व्यवस्थापनका लागि दर्ता भएको समिति छ त्यो समितिले यसको विषयमा के सोचेको छ खै ? बसपार्कमा अनेक थरीका मान्छे बसेका छन्, यस्तो फोहोर छ, व्यवस्थापन छैन, समिति स्थिर रहेको हँुदा यहाँको बसपार्क थला परेको हो । दोस्रो कुरा यो बसपार्क व्यवस्था व्यवस्थित गर्नका लागि हामी स्थानीय बासीन्दाहरुले कसरी प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्तरकृया छलफल नहुनुका कारण पनि यो समस्या पैदा भएको हो कि भन्ने लग्छ । तेस्रो कुरा बसपार्क ग्यारेजका लागि कि साच्चै बसपार्क हो भन्ने कुरामा ध्यान दिने हो । खासगरी बसपार्कमा रहेका ग्यारेजहरु हटाउनु पर्ने र बसपार्कको लागि पुन प्रयोजनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । बसपार्कको विषयमा सबैले साँेच्नु पर्ने देखिन्छ । बसपार्कको विषयमा नेता जनप्रतिनिधीले चासो नदिदा अझेलमा परेको छ । यसलाई मुलभुत रुपमा प्यूठानको मुटु मानिने गरेको छ । प्यठान बसपार्कको नामले जुम्रीमा बस्ती बिस्तार भैरहदा व्यवस्थित बस्ती बिस्तारका लागि सवैको चासो हुनु पर्छ । हामी एक अर्का प्रति हिलो छापाछाप गर्नु भन्दा स्थानीय सरकार सामाजीक अगुवा लगाएत सवै मिलेर बसपार्क व्यवस्थितका लागि पहल गर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्राणरक्षा मासिकमा प्रकाशित
विद्यार्थीलाई फोनबाट पढाउँदै माण्डवी मा.वि